Izitoko zokuqala ze-HomePod zithengiswe e-United States | Ngivela kwa-mac
Kusasa ama-HomePods okuqala azoqala ukufika kumakhasimende abeke eyodwa yale mikhiqizo ngosuku lokuqalisa, ngoFebhuwari 9, kuphela e-United States, United Kingdom nase-Australia. Noma kunjalo, akusenakwenzeka ukufaka i-oda (ngewebhusayithi esemthethweni yakwa-Apple) ngosuku lokuqala lokubeletha. Ngokuphambene nalokho, usuku olusha lokulethwa lihlehliselwe uFebhuwari 12-13.
Ngakho-ke, Siyaqonda ukuthi isidingo sedivayisi entsha yomkhiqizo besilokhu sinjalo okuthengiswa njengamanje, okudlula konke obekulindelwe ngumkhiqizo waseNyakatho Melika.
Ukunikezwa kwe-HomePod kwamanye amazwe okwethulwa, njenge-United Kingdom ne-Australia, nakho bekufuneka kakhulu, futhi ngokulandelana kuye kwabambezela izinsuku zokulethwa ngenxa yalokho.
Ukunikezwa kwama-HomePods emazweni ahlukene kwenziwe ngendlela engaguquguquki futhi egcwele, futhi Amakhasimende amaningi azothola i-HomePod ebikade ilindelwe kusasa. Kodwa-ke, cishe kuwo wonke amazwe akhululwayo, usuku lokukhishwa lwamanje lushintshiwe futhi lahlehliselwa isonto elizayo.
Abathengisi abambalwa kuphela abasanikela ngedivayisi ekudala ilindelwe yedethi yokuqala yokwethulwa yase-US.. Okuthengwa KakhuluIsibonelo, uyaqinisekisa ukuthi usenganikela ngamayunithi wokulethwa kusasa. Isimo esifanayo sabathengisi abathile e-UK.
Futhi, I-Apple izama ukuhlomisa izitolo zayo ezibonakalayo ngamayunithi anele ukuze amakhasimende akwazi ukuya ngqo esitolo futhi athole idivayisi entsha kubafana baseCupertino.
Ukuthunyelwa ngewebhusayithi esemthethweni ye-Apple yalabo abathathe ithuba lokuthola enye yamadivayisi okuqala emakethe Bazoyithola kusasa nge-UPS ngokulethwa okucacile. Okwethu sonke, kuzofanele silinde isikhashana.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » Izitoko zokuqala ze-HomePod zithengiswe e-United States
Sivele sinenguqulo yama-49 yesiphequluli se-Safari Technology Preview